आर्मीका खगेन्द्रलाई टिभिएस वीरगन्ज म्याराथनको उपाधि | Hamro Khelkud
‘रियल म्याड्रिडले पठाएको पत्र नखोली च्यातिदिएँ’
रहेनन् सेते दाई
सन्दीप सम्मिलित दिल्लीले आइपिएल उपाधि जित्न सक्ने ४ आधार
सान्चो बेच्ने डर्टमन्डको संकेत
रामोसको रियलमै रहने इच्छा
रियलको नजरमा कामाभिंगा
आर्मीका खगेन्द्रलाई टिभिएस वीरगन्ज म्याराथनको उपाधि
शनिबार, फाल्गुन १७, २०७६
वीरगन्ज (हाम्रो खेलकुद)– त्रिभुवन आर्मी क्लबका खगेन्द्र भाटले टिभिएस वीरगन्ज म्याराथनको उपाधि जितेका छन् । शनिबार भएको म्याराथन(४२.१९५ किमी) दौड २ घन्टा २१ मिनेट ०७. ५३ सेकेन्डमा पुरा गर्दै खगेन्द्र च्याम्पियन बनेका हुन् ।
आर्मीकै राजन रोक्का दोस्रो र हरिकुमार रिमाल तेस्रो भएका छन् । राजनले २ घन्टा २७ मिनेट ३९.९५ सेकेन्ड र १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) का पदक विजेता हरिले २ घन्टा २८ मिनेट ३५.८६ सेकेन्डमा दौड पुरा गरेका हुन् ।
खगेन्द्रले टिभिएस स्कुटरसहित १ लाख २५ हजार रुपैयाँ जित्दा राजनले १ लाख ५० हजार र हरिले १ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरे ।
त्यस्तै हाफ म्याराथनमा पनि आर्मीकै खेलाडी शीर्ष ३ मा रहन सफल भएका छन् । जसमा गजेन्द्र राई विजयी बनेका छन् । गेजेन्द्र भन्दा ६ सेकेन्डले पछि परेका दीपक अधिकारी दोस्रो र रामजी बस्नेत तेस्रो भएका छन् ।
गजेन्द्रले १ घन्टा ९ मिनेट ४९ सेकेन्डमा दौड पुरा गरेका थिए । त्यस्तै दीपकले १ घन्टा ९ मिनेट ५६ सेकेन्ड र रामजीले १ घन्टा १० मिनेट ३५ सेकेन्डमा दौड पुरा गरे ।
महिलातर्फ राजपुरा पछाई पहिलो, फलुमती राना दोस्रो र विन्द्रा श्रेष्ठ तेस्रो भइन् । राजपुराले १ घन्टा १९ मिनेट ४७ सेकेन्डमा दौड पुरा गरिन् । फुमतीले १ घन्टा २४ मिनेट ३० सेकेन्ड र विन्द्राले १ घन्टा २८ मिनेट १६ सेकेन्डमा दौड पुरा गरिन् ।
पुरुष महिला दुवैतर्फका विजेताले ७५ हजार, दोस्रोले ५० हजार र तेस्रो हुनेले ३५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरे ।
महिला १० किमी विभागिय दौडमा आर्मीकी पूर्ण लक्ष्मी नौपाने विजयी बनिन् । आर्मीकै सरस्वती भट्ट राई दोस्रो र नेपाल पुलिस क्लबलकी विर्सना कुमाल तेस्रो भइन् । महिला खुला १० किलोमिटर दौडमा सकुन्तला ठगुन्न पहिलो, मन्जु राउत दोस्रो र खिला थापा तेस्रो भइन् ।
त्यस्तै पुरुषतर्फको १० किलोमिटरमा आर्मीका कल्याण बानिया पहिलो, एपिएफका गणेश ठकुरी दोस्रो र टंक कार्की तेसे भए । पुरुष १० किमी खुलामा सागर श्रेष्ठ पहिलो, दीनेश बोगटी दोस्रो र प्रिन्सकुमार गुप्ता तेस्रो भए ।
१० किमीको सबैतर्फका विजेताले २० हजार, दोस्रोले १५ हजार र तेस्रो खेलाडीले १० हजार रुपैयाँ प्राप्त गरे ।
म्याराथनका विजेतालाई प्रदेश २ का मुख्य मन्त्री लालबाबु राउत, नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापालगायतले पुरस्कृत गरे ।
नेपाली सेना मध्य प्रितना र २८ बाहिनी, वीरगन्ज महानगरपालिका र भ्रमण वर्ष २०२० को प्रदेश २ को कार्यालयको संयुक्त आयोजनामा पहिलो पटक वीरगन्जमा भएको म्याराथनलाई टिभिएसले मुख्य प्रायोजन गरेको थियो । एकताका लागि दौड, स्वच्छ देश स्वस्थ मधेश सन्देशसहित सेना दिवसको उपलक्ष्यलाई समेत पारेर म्यानराथन आयोजना गरिएको बताइएको छ ।
सहारा यसै सहारा होइन !
सारा विश्वसँगै नेपालले गुमाएको ‘कोबी’
साग, खेल पर्यटन र भ्रमण बर्ष
‘लकडाउन’ तोडेरै सेल्टाका सिस्टो स्पेनबाट डेनमार्कमा
सिजन अन्त्यको खतरा!
आमा र बहिनीहरुसँग समय बिताउँदै रोनाल्डो
पारसको विश्व कीर्तिमान तोड्न प्रयासरत ४ खेलाडी
बास्केटबलमा सदिनाको समर्पण
सोमवार, माघ २०, २०७६
भलिबलकी प्रतिभाको बैंकर बन्ने सपना
शनिबार, पौष १९, २०७६
भिआइपी प्याराफिटमा छानो हाल्न शुरु
बुधबार, मंसिर ४, २०७६
सागको चटारो, काम सक्न हतारो
शुक्रबार, कार्तिक १५, २०७६